Wah Wah Thinn Fitness Center ( 1 ) | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Wah Wah Thinn Fitness Center ( 1 ) | Kamayut
Wah Wah Thinn Fitness Center ( 1 )
Wah Wah Thinn Fitness Center ( 1 ) ကို အမှတ် ၄၊ ရွှေမာလာရိပ်မွန်၊ Lion City ဝင်းအတွင်း ဘုရင့်နောင်လမ်းမ ၊ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် 1999 ခုနှစ်မှ စတင်ကာဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခု Fitness တွင် Fitness ကစားခြင်းများအပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နုပျို ကျန်းမာစေရန်အတွက် ယောဂသင်တန်း၊ ကိုယ်ခန္တာကို အမြန်ဆုံးဝိတ်ချပေး၍ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုများကို ရရှိစေရန် အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ခါးနာ ကိုယ်အလေးချိန်များသူအား Fitness Ball ဖြင့်ဝိတ်ချပေးခြင်း၊ ဘောလုံးဖြင့်ကခုန်ခြင်းများ ၊မလိုအပ်သောအဆီပိုများကို အမြန်ဆုံးချေဖျက်ဖယ်ရှားပေးခြင်း များကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Locker room များ၊ ရေပူရေအေး ၊ အဝတ်လဲခန်းများ သီးသန့်ထားရှိပေးထားပါသည်။
Fitness fee အနေဖြင့် တစ်လ ကို ၅၀၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပြီး သုံးလစာကို ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်သာကျသင့်မှာဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ်ကြေးမှာ ၅၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ Fitness နှင့် အတူ Beauty Spa ကိုပါတွဲဖက် ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
06:00 AM - 08:00 PM ( ဘာမှမရှိပါ )
No 4, Shwe Marlar Yeik Mon Housing, Bayint Naung Road, Kamaryut Township, Yangon.
အနီးအနား ရေကြောင်းမှတ်တိုင် မှတ်တိုင်5မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Wah Wah Thinn Fitness Center ( 1 ) Wah Wah Thinn Fitness Center ( 1 ) is located at No 4, Shwe Marlar Yeik Mon Housing, Bayint Naung Road, Kamaryut Township, Yangon. The Fitness was opened since 1999 and various gym and fitness services are available there. The fitness also provides Yoga Class, Aerobic, Fitness Ball, Dancing and Beauty Spa. The fitness offers good facilities including Locker rooms, shower, experienced trainers, fully fitness material and gym equipment for all Ladies and Gents. One month for fitness fee is 50000 Kyats and three months for only 100000 Kyats. Daily Fee will be 5000 kyats.
Total Skin Repair (Kamaryut)
ယွမ်ယွမ် Hair Design and Beauty Salon
Dr Skin Beauty Clinic
July Star Beauty Saloon